जापानको सुदूर उत्तरमा सप्पोरो यात्रा समाचार
जब तपाईं नक्शा देख्नुहुन्छ जापान तपाईले एउटा टापुको देश पत्ता लगाउनु भयो जुन मूल रूपमा चार टापुहरु र दश ठुलो क्षेत्रहरु मिलेर बनेको छ: कान्टो, कन्साई, होक्काइडो, क्युशु, ओकिनावा, शिकोकू, चुगोोकु, तोहोकु र चुबु। जापानी संस्कृति टोकियोको वरिपरिको क्षेत्रमा र दक्षिणतिर प्राथमिकताका साथ विकसित भयो र हिउँद र तपस्या उत्तरी छोडियो जसले १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा मात्र एउटा स्थिर विकास देख्यो।
यहाँ छ सप्पोरो, देशको पाँचौं ठूलो सहर र १ teen औं शताब्दीमा यो केवल सात व्यक्तिको बसोबास पछि सब भन्दा द्रुत गतिशील विकासशील शहर हो। सात! आज कथा फरक छ तर एकै समयमा यो यति धेरै पर्यटकहरू प्राप्त गर्दैन किनकि यो सबै सबैभन्दा लोकप्रिय जापानी आकर्षणबाट टाढा छ। लज्जास्पद कुरा हो, यदि तपाईं २०२० मा जापान भ्रमण गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने ओलम्पिकको लागि, म तपाईंलाई छोडछु सप्पोरो र यसको आकर्षणको बारेमा जानकारी.
2 सप्पोरोमा के हेर्ने र के गर्ने
होक्काइडो चार जापानी टापु मध्ये एक हो र सबैभन्दा कम विकसित छ। यो धेरै कडा हिउँद छ र यसको गर्मी देश को बाकी को जस्तै गरम र चिसो छैन। तर यो एक आकर्षण हो प्रकृति प्रेमीहरूको लागि।
तपाइँ टोकियोलाई सप्पोरोसँग कसरी जोड्नुहुन्छ? सबै भन्दा छिटो हो विमान र मार्ग एकदम सक्रिय छ त्यसैले विभिन्न कम्पनीहरूले प्रति घण्टा धेरै उडानहरू संचालन गर्दछ, जसमा JAL वा एएनए र कम लागतको भेनिला एयर वा जेटस्टार समावेश छ। सामान्यतया, तिनीहरूले हनेडा एयरपोर्टलाई सप्पोरोमा नयाँ Chitose सँग जोड्दछन् र उडान केवल 90 ० मिनेटसम्म रहन्छ।
एउटा साधारण उडान 400०० यूरो लाग्न सक्छ तर नडराउनुहोस् कि तपाईं कम लागत कम्पनीहरूसँग सस्तो पाउनुहुनेछ वा विशेष JAL / सेना टिकट किन्नुभयो जुन जापान रेल पास जस्तो छ तर हवाईजहाजहरूको लागि।
तपाईं सक्नुहुन्छ ट्रेन द्वारा जानुहोस्? यदि उहाँ JR Tohoku / Hokkaido Shinkansen (बुलेट ट्रेन), टोकियोलाई शिन हाकोडाटेसँग चार घण्टामा जोड्छ र त्यहाँबाट तपाईं साप्पोरो सम्म एक्सप्रेस ट्रेन लिनुहुन्छ जुन करीव साढे तीन घण्टा बढी लाग्छ। एक तर्फ २ 270० यूरो हिसाब गर्नुहोस् र अन्य फिर्ता र आठ घण्टाको यात्रा। यहाँ सबै कुरा द्वारा कभर गरिएको छ जापान रेल पास। साथै, यदि तपाईं केहि फरकको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं नागोया, सेन्दै र अन्य शहरहरूबाट छोड्ने डुry्गामा जान सक्नुहुन्छ।
फेरीले होन्शु र होक्काइडो बीचमा पोर्टहरू जोड्छ र सामान्यतया ओप्पारु भन्ने शहरमा आउँछ जहाँ साप्पोरो वा तोमाकोमाईबाट एक घण्टा वा आधा घण्टा हुन्छ। एक पटक शहरमा, यो वरिपरि जान सजिलो छ किनकि यो नयाँ छ किनकि यसमा एक अमेरिकी शहरको डिजाईन छ, जुन आयताकार र साधारण लेआउटको साथ छ। छ तीन मेट्रो लाइनहरु, एक ट्राम र धेरै बसहरु। बसहरूमा तपाई JRP प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सप्पोरोमा के हेर्ने र के गर्ने
पहिलो कुरा: यो सप्पोरो हिउँ महोत्सव। म भन्छु कि यस उत्सव मात्र जाडोमा सप्पूरोमा यात्रा गर्न लायक छ। यो फेब्रुअरी मा एक हप्ता को लागी र 50 देखि मनाईएको छ। आज यसको सहरमा तीन स्थानहरू छन् र तपाईं हिउँका मूर्तिहरू देख्नुहुनेछ जुन सजीलै २ meters मिटर चौडा वा १ meters मिटर अग्लो मापन गर्न सक्दछ। र रातको १० सम्म उनीहरूसँग बत्तीहरू छन् त्यसैले दृश्य अझ सुन्दर छ। त्यहाँ सय भन्दा बढी मूर्तिकलाहरू, घटनाहरू र कन्सर्टहरू छन् र प्रवेश शुल्क ११ यूरो छ र २ 25 घण्टासम्म रहन्छ।
दोस्रो हो बियर संग्रहालय। जापानीहरू बियरको प्रेममा डुबेका छन् र त्यहाँ धेरै स्थानीय ब्रान्डहरू छन् तर कुनै श without्का बिना मोह यहाँ सप्पोरोमा पैदा भएको थियो। ब्रान्ड नै, सप्पुरो, देशकै सब भन्दा पुरानो हो, जुन १ 1877। पछि सुरू भयो। संग्रहालय ''87 मा खोलियो र तपाईं इतिहास जान्न सक्नुहुनेछ, बिभिन्न विविधताहरू खोज्नुहोस्, र अधिक। नजिकैको छ बियर बगैचा रेस्टुरेन्टको साथ।
बार, कराओके कोठाहरू, पसलहरू, प्याचिन्को र रेष्टुरेन्टहरू आफै क्षेत्र हो सुसुकिनो। यो Nanboku मेट्रोको सप्पोरो स्टेशनबाट केवल तीन स्टपहरू हो र तपाईंले खोज्नु पर्ने विशेषता भनेको हो योकोचो रामेन, स्थानीय ramen को विविधता। यस विशेषताको लागि प्रयास गर्नको लागि अर्को आदर्श स्थान एस्टा शपिंग सेन्टरको १० औं तलामा रहेको सप्पोरो रामेन रिपब्लिक हो। सप्पोरो स्टेशन: त्यहाँ आठवटा साना रेस्टुरेन्टहरू छन्।
स्टेशन को कुरा गर्दा, यो भन्नु पर्दछ कि यो धेरै पसलले घेरिएको छ र पुरानो छ, जबकि हालको भवन २०० from को हो। यो स्टेशनको टेरेसमा टेरेस भएकोले भ्रमण गर्नु उचित छ। अवलोकन डेक, the T38 (th 38 औं तलामा), जमीनबाट १ 160० मिटर माथि। दृष्टिकोण महान हो र तपाइँ तिनीहरूलाई को वेधशाला को ती थप्न सक्नुहुन्छ टिभि टावर Odori पार्क बाट। T38 बिहान १० देखि ११ बजेसम्म खुला छ र costs२० येनको लागत छ।
El Odori पार्क यो बरु एक फराकिलो प्वाल हो जुन शहरको बीचमा ओगटेको छ र उत्तरबाट दक्षिणमा एक किलोमिटर र आधाको लागि दौडिन्छ। यो एक सुन्दर हरियो ठाउँ हो र यो यहाँ छ कि फेब्रुअरीमा केही हिउँ मूर्तिकलाहरू भेला हुन्छन् र त्यहाँ १ 150० मिटर अग्लो टिभी टावर पनि छ। तपाई पार्कमा पुग्नुहोस् जेआर सप्पोरो स्टेशनबाट १० मिनेट पैदल। टावरमा प्रवेश गर्न y२० येन लागत र यो बिहान 720 देखि १० बजेसम्म खुला रहन्छ।
सहरको राम्रो वा अधिक पूर्ण दृश्य हेर्नका लागि, तपाईं जान सक्नुहुन्छ माउन्ट मोइवा। तपाईं मिनी केबलवेमा जानुहुन्छ र शीर्षमा प्लेटफर्म र एउटा रेस्टुरेन्ट छ। दृश्यहरू सुन्दर छन् र त्यहाँ तारामंडल र एक थिएटर पनि छ। जाडोमा एक सानो स्की केन्द्र पनि छ।
हामीले सुरुमा भनेका थियौं कि सपोरो र यसको वरपर प्राकृतिक रूप प्रेमीहरूको लागि स्वर्ग हो दिन यात्रा तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ: त्यहाँ छ निसेको स्की रिसोर्ट, रुसुत्सु, Nooribetsu थर्मल रिसोर्ट र जोजान्की र ताल शिकोट्सु र टोया। गर्मीमा मोती भनेको फुरानोको ल्याभेन्डर क्षेत्रहरू, समुद्री फूलको पहेंलो, पहेंलो, गुलाबी, रातो र हरियो ठाउँ।
एक राम्रो योजना टोकियो पुग्न, तीन दिनको लागि रहनु, र त्यसपछि साप्पोरोको लागि हवाइजहाज लिन सक्छ। टोकियोमा फिर्ती हवाई जहाज वा ट्रेन द्वारा पनि हुन सक्छ, यी उत्तरी स्थानहरूमा शिink्कनसेनको मजा लिन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » जापानको सुदूर उत्तरमा सप्पोरो